Skin-Hungry All Cuddle Sluts (၂၀၁၀) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Self-ဖူလုံရေးများ၏ concept ကိုဘယ်လိုအလားအလာရှိသနည်း
“ ချွတ်” လို့ခံစားရပြီးဘာလုပ်ရမှန်းစဉ်းစားနေသလား။ သင်ရုံထိတွေ့ငတ်မွတ်နိုင်ပါတယ်။ သို့ဆိုလျှင်တစ်ကိုယ်တော်လိင်သည်မမှန်ကန်သောခံစားချက်ကိုကုစားနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကိုသာအော်ဂဇင်လိုအပ်ချက်မဟုတ်ကြောင်းထွက်လှည့်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များလည်းရှိပါတယ် ရင်းနှီးမှု လိုအပ်ချက်များ။ လူသားများကဲ့သို့သောလူမျိုးစုစုံတွဲများအတွက်ချစ်ခင်တွယ်တာမှုနှင့်ရင်းနှီးမှုတို့အတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောပေါင်းသင်းမှုသည်စိတ်ခံစားချက်ဆေးဖြစ်သည်။ ဒါငါတို့ပါပဲ ဦးနှောက်ကို set up နေကြတယ် သုခချမ်းသာများမျှမျှတတခံစားချက်တွေကိုပူဇော်ကြောင်း neurochemicals ထုတ်လုပ်အားဖြင့်သူတို့ကိုမြားတှငျပါဝငျခွငျးအဘို့အကျွန်တော်တို့ကိုဆုချဖို့။
ကွဲပြားခြားနားစွာဤသို့ပြောရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်၏အဓိကဆုလာဘ်အစီအစဉ်၏အဓိကညွှန်ကြားချက်များမှာအစားအစာ၊ ရေ၊ နှောင်ကြိုးနှင့်မိတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုခေတ်သစ်ဘဝသည်အနီးကပ်ထိတွေ့မှုနှင့်နှောင်ကြိုးလိုအပ်မှုကိုမဖြည့်ဆည်းနိုင်တော့သောကြောင့်ဆုလာဘ်တိုက်နယ်သည်ဗလာကင်းစင်မှုကိုခံစားနိုင်သော်လည်းဖြည့်ဆည်းရန်“ ပတ်ပတ်လည်ရှာဖွေ” နေသည်။ Junk food ကဲ့သို့အင်တာနက် porn သည်လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စေသောအစားထိုးတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအမှန်တကယ်တန်ဖိုးရှိသောလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုကိုတွေ့ရှိပြီဟုထင်မြင်စေခြင်းဖြစ်သည်။ ယောက်ျားတစ်ယောက်ကရှင်းပြသည်မှာ“ အမှန်တရားမှာမင်းကိုဘယ်သူ့ကိုမှဝင်မထားဘူး၊ မင်းတောက်လောင်နေတဲ့ထောင့်မှန်စတုဂံတစ်ခုကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်မင်းဟာဆုတစ်ခုရနေတယ်၊ ​​အဲဒါကမင်းကိုအပြင်ထွက်မယ့်အစားအဲဒီမှာနေဖို့လှုံ့ဆော်ပေးတယ်။ ”
၀ မ်းနည်းစရာကောင်းတာကတစ်ကိုယ်တော်အော်ဂဇင်တွေကမတူပါဘူး neurochemical ကော့တေး soothing တကယ့်အဆက်အသွယ်အနေနှင့် - ယနေ့သူတို့၏ကျေးဇူးကြောင့်သူတို့လိုက်စားခြင်းသည်အလွယ်တကူဖြစ်လာနိုင်သည် hyperstimulating porn သို့မဟုတ်လူစွမ်းကောင်း vibrators ။ ကျနော်တို့အားကောင်းလှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူပိုပြီးအော်ဂဇင် engineer အမျှစိုးရိမ်ပူပန်မှု၏ခြုံငုံခံစားချက်များကို, ဝိရောဓိ, စိတ်ကျေနပ်မှု၏ခံစားချက်များကိုထင်ရှားသောနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လိင်၊ ထိ / ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုလိုအပ်ချက်များကိုချစ်မြတ်နိုးဖွယ်ကောင်းသောအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအထုပ်တစ်ခုဖြင့်ဖြည့်ဆည်းပေးလျှင်ကောင်းပါသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အချစ်ဇာတ်လမ်းများတွင်သဲကန္တာရအချို့ကိုဖြတ်ကျော်ရန်လိုအပ်သည်။ သဲကန္တာရခရီးသွားများအစဉ်အလာအဘယ်သို့ပြုသနည်း အိုအေစစ်တစ်ခုအတွက် ဦး ခေါင်း။ သူငယ်ချင်းများကိုဖမ်းဆီးခြင်းဖြင့်သူတို့၏ oases များကိုတွေ့ရှိခဲ့သည့်အချက်နှစ်ဆယ်လေးချက်ရှိသည်။
ငါ၌အကျိုးကျေးဇူးရှိသောသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိသော်လည်းအကျိုးကျေးဇူးများမှာသူမကတစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်လာကြည့်ပြီးရုပ်ရှင်ကြည့်နေသည့်အချိန်၌ရှုပ်နေသည်။ သူမအပျိုစင်ဘ ၀ ဖြစ်ပြီး၊ သူမကိုသမိုင်းကြောင်းအရဘယ်တော့မှလိင်မဆက်ဆံတာဟာကောင်းပါတယ်။ ငါလိုအပ်တာကိုလိင်ဆက်ဆံဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တာကအရမ်းလွတ်မြောက်သွားတယ်။ အတိတ်ကာလကငါ့ကိုစိတ် ၀ င်စားဖို့စိတ် ၀ င်စားသောအမျိုးသမီးတစ်ယောက်သည်ကျွန်ုပ်၏နေရာတွင်ရှိနေပါကကျွန်ုပ်သည်တစ်ကိုယ်တည်းလိင်ဆက်ဆံရန်လိုက်ရှာလိမ့်မည်။ ယခုမူငါသည်ငါပဲအနားယူခြင်းနှင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းနှင့်ကျွန်တော်ငတ်ပြတ်နေပုံကိုကြာမြင့်စွာရှင်းပြပြီးနောက်သူမသည်သူ၏အင်္ကျီကိုချက်ချင်းချွတ်ပြီးကျွန်ုပ်အိပ်ရာပေါ်သို့ဆွဲတင်ခဲ့သည်။ သူမဘယ်လောက်အလွယ်တကူယူနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တော်တော်အံ့အားသင့်မိပါတယ်။ ၂ နာရီလောက်ဆုံနေပြီးခေါင်းကိုဆန့်ပြီးလက်မောင်းကိုကိုင်ရင်းခေါင်းကိုရင်ဘတ်နဲ့ထိုင်လိုက်တယ်။ ကျနော်တို့အများစုနှင့်စကားပြောပြီး၊ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သည့်အချိန်နှင့်ဤတွင်ရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါစကားပြောဆိုမှုဒါပွင့်လင်းခဲ့သည်။ ကျနော်တို့လျှို့ဝှက်ချက်များကိုထုတ်ဖော်ပြသကြောင့်အလွန်သဘာဝခံစားရတယ်။ ကျွန်တော် snuggling မပြုခဲ့လျှင်ဤဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေအပြုသဘောပါပဲ။
အကြှနျုပျ၏ဘုရား, ဘေးကင်းလုံခြုံမှု၏ခံစားချက်များကိုမယုံနိုင်စရာရှိကြ၏။ ကိုယ့် soooo, ငါမသိ, မှန်၏။ ယခုတွင်ငါသည်ကိုယ်ကိုကိုယ်ထင်မြင်သည်၊ ဤအချက်သည်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမအချင်းချင်းတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ဆက်စပ်သင့်သည်။ ဒီမိန်းကလေးငယ်ကိုရင်ဘတ်ထဲဆွဲတင်ပြီးသူမခိုကိုးရာမဲ့နေသလိုခံစားရတယ်။ ငါလည်းသူမ၏မျက်နှာ၌တွေ့မြင်နိုင် သူမသည်အလွန်စိတ်အေးလက်အေးကြည့်လိုက်ပြီးအိပ်ပျော်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေသည်။ အရင်တုန်းကမတည်မြဲတဲ့အချိန်ကာလတွေကိုရှောင်ဖို့တစ်ခါမှမကြိုးစားခဲ့ဖူးဘူး၊ ဒါကြောင့်ဒီခံစားချက်တွေဟာအသစ်အဆန်းပဲ။ ထိမိမှုအချို့သည်နှိုးဆွပေးသည်ကိုကျွန်ုပ်ဝန်ခံရပေမည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ရည်မှန်းချက်မရှိသောထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းနှင့်မပတ်သက်ပါ။ ညနေခင်းတွင်အပြာရောင်ဘောလုံးအာရုံခံစားမှုတစ်ခုရှိခဲ့သော်လည်းလုံးဝဆိုးရွားခြင်းမရှိပါ။
သူမထွက်ခွာသွားပြီးနောက်ငါနည်းနည်းတွေးတောဆင်ခြင်ပြီးဘာကိုခန့်မှန်းရသလဲ? အနည်းငယ်သောအကြံအစည်။ ဒါဟာအံ့သြစရာပဲ! ငါ ထပ်မံ၍ ဤအမှုကိုလုပ်ရန်သူမကိုတောင်းမည်မှာသေချာသည်။
လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုမဖြစ်စေဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးသိတယ်။ သူကနမ်းဖို့တောင်မသွားဘူး။ ငါတို့လိုခံစားခဲ့ရရင်ဒါဟာမှောင်နေခြင်း၊ ဒါဟာသို့သော်နီးပါးပြီးပြည့်စုံသောအဝတ်အချည်းစည်းပါဝငျသညျ။ တဖန်သင်တို့အဘယ်သို့သိသနည်း ကောင်းပါတယ်
ကျနော်တို့မစခင်ကနယ်နိမိတ်ကိုသတ်မှတ်မထားဘူး၊ ဒါပေမယ့်သူကငါ့အတွင်းပိုင်းကိုဘယ်တော့မှမဖြတ်ဘူး။ ငါတို့အိပ်ယာဝင်ချိန်တွင်သူကအနည်းငယ်ဖွင့်ထားသည်၊ သူကယောက်ျားလေးတစ် ဦး သည်ဆွဲဆောင်မှုရှိသော၊ အဝတ်အချည်းစည်းရှိသောမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်အိပ်ရာဝင်ချိန်တွင်အနည်းငယ်မဖွင့်ရန်နှင့်မနက်ခင်း၌ထင်းရန်လည်းမဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြောခဲ့သည်။ သို့သော် 'ကိုယ်ထိလက်ရောက်လှည့်ခံ' ခြင်းနှင့် 'စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုချင်သောလိင်' သည်ကွဲပြားခြားနားသည်။
သူစိုက်ထူလိုက်သောအခါသူ၏လိင်အင်္ဂါများကိုကျွန်ုပ်နှင့်ဝေးဝေးနေရန်သတိထားခဲ့သည်၊ ဒါဟာဘုရင့် asexual ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာအစနှောင်ကြိုးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယခုတွင်အမြဲတမ်းမိတ်ဆွေဖြစ်လိမ့်မည်၊ ဆက်ဆံရေး၊ လိင်၊ အတူတူအဝတ်အချည်းစည်းဖြစ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးမညီကြောင်းကိုချိုးဖောက်ခြင်းသည်စကားပြောရန်လက်ခံနိုင်သောအရာနှင့် ပတ်သက်၍ တားမြစ်ချက်ကိုချိုးဖျက်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ ငါဟာဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်သူ့အနေအထားကိုတောင်မှအလွဲသုံးစားမပြုခဲ့ဘူးလို့ရိုးရိုးသားသားပြောနိုင်တဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့အတူအဝတ်အချည်းစည်းနဲ့အိပ်နိုင်ခြင်းဟာတကယ့်ကိုလှပပြီးယုံကြည်ကိုးစားထိုက်တဲ့အတွေ့အကြုံပါ။
ယခုငါမည်သူမဆိုဖက်လိမ့်မယ်။ မည်သူမဆိုမည်သည့်လိင်ကိုမဆိုငါအကုန်လုံးကြိုက်လိမ့်မည်။ သူတို့သည်သူတို့နှစ်သက်သမျှကာလပတ်လုံး - သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ပြီးကျွန်ုပ်အားသက်သောင့်သက်သာဖြစ်စေသည်။ ဘယ်သူ့ကိုမှမနာပါဘူး အဲဒါကငါ့ကိုဖြစ်စေတယ်၊ ​​ငါကလွဲရင်ဘယ်သူ့ကိုမှပိုပျော်ရွှင်စေတယ်။
တစ်နေ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နှင့်စကားပြောနေစဉ်“ နောက်ဆုံးထိတာနဲ့ငါဘယ်လောက်အထိထိမိခဲ့တာလဲ” ဟုကျွန်တော်အံ့သြစွာမေးခဲ့သည်။ ငါထိမိတာကြာပြီဖြစ်လို့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကပွေ့ဖက်လိုက်သည်ကိုပင်နိုင်ငံခြားသားဟုခံစားရသည်။ ငါကျင်းပခံရဖို့မျှော်လင့်ကြောင်းသဘောပေါက်; ငါဗလာခံစားခဲ့ရနှင့်အတွင်းပိုင်းကုန်ခမ်း။
ငါသည်လည်းငါ၏အစွမ်းအင်ငါ၏အမိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုမှအဖြစ်အလွန်ချစ်နှင့်စွမ်းအင်ပေးရလျော့နည်းနိုင်ပါငါ့ကိုစွန့်ခွာတစ်ခု uncharacteristic လမ်းအတွက်ပွောငျးလဲနေသောခဲ့သဘောပေါက်လာတယ်။ ငါသည်ဤဆွေးနွေးတင်ပြဘယ်သူကိုနှင့်အတူတစ်ဦးကအမျိုးသမီးမိတ်ဆွေတစ်, သူမကတစ်ဦးတစ်လ cuddled မဟုတ်သောအခါသူမကသူတို့နှင့်အတူရငျးနှီးဖြစ်ခြင်းသူမရဲ့အနာဂတ်အခွင့်အလမ်းတွေကိုလျော့ကျလာ, ယောက်ျားဆီသို့အမျက်ထွက်ခြင်းနှင့်နာကြည်းဖြစ်လာကြောင်းသတိပြုမိကပြောသည်။
ဒီစကားပြောဆိုမှုပြီးတာနဲ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကောင်လေးဆီလာဖို့အခွင့်အရေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကိုအခြားအစီအစဉ်များနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီကတခြားနှစ်သိမ့်ရန်အဘို့အအာကာသရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါတို့တစ်နာရီကြာစကားပြောခဲ့ရတယ်၊ ငါတို့တစ်နေ့တာလုံးစကားဝိုင်းပြောနေတာပဲ။ “ ငါဒီညကောင်းကောင်းအိပ်နိုင်ပြီ” လို့ထင်ခဲ့တယ် နှင့်voilà။ သုံးလအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်အိပ်ပျော်ပြီးလန်းဆန်းလာသည်နှင့်အိပ်ပျော်သွားသည်။ နောက်တစ်ညနေမှာရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးပြွတ်သိပ်နေတယ်။ ငါရက်သတ္တပတ်အတော်ကြာစိတ်ကူးခံစားရတယ်။ (မကြာမီသူသည်တောင်အမေရိကသို့သွားခဲ့သည်။ )
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နှင့်စကားပြောသောအခါသူသည်သူချိန်းတွေ့သောအမျိုးသမီးနှင့်သဘောတူညီမှုရှိကြောင်းသိခဲ့ရသည်။ သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးဟာနောက်ဆုံးမှာတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်“ မသင့်” ဘူးဆိုတာသိတယ်။ သို့သော်သူတို့၏ပုံမှန်ကာမဂုဏ်ခံစားမှုကသူတို့ကိုကမ္ဘာပေါ်ရှိဆင်းရဲနွမ်းပါးသောတစ်ကိုယ်ရေသမားများအဖြစ်မသွားခြင်းကိုရှောင်ရှားစေသည်။ သူကရှင်းပြသည်မှာ“ ယောက်ျားတွေကသူတို့ခဏတာမချိန်းတွေ့ကြရင်သူတို့ဂိမ်းကိုချွတ်လို့ရမယ်ထင်တယ်။ သူ၏စွမ်းအင်မျှတမှုရှိ၏ သူသည်ဘဝရည်ရွယ်ချက်ကိုအပြည့်အဝအာရုံစိုက်နိုင်ပြီးဘဝကိုပျော်မွေ့ခဲ့သည်။ သူသည်လုံးဝကျန်းမာသန်စွမ်းသောအမျိုးသားတစ် ဦး ဖြစ်သောကြောင့်အမျိုးသမီးသစ်များနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းသည်သူ့အတွက်မလွယ်ကူခဲ့ပါ။ သူသည်အိမ်ထောင်ဖက် - အလားအလာရှိသောအမျိုးသမီးအသစ်နှင့်တွေ့သောအခါအိပ်ရာထဲအလျင်အမြန် ၀ င်လာပြီးပိုမိုနက်ရှိုင်းသောရင်းနှီးမှုတိုးပွားလာရန်အခွင့်အလမ်းများကိုအမှိုက်ပုံးထဲထည့်ရန်မလိုအပ်တော့ပါ။ "တွင်သူမ၏အတွေ့အကြုံများကိုပိုမိုဖတ်ပါသငျသညျဆာငတ်အသားအရေဖြစ်ပါသလား"
တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံလောက်မှုရှိစေရန်ခေတ်မီသောတွန်းအားသည်ထိတွေ့မှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောပေါင်းသင်းမှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေခံလိုအပ်ချက်ကိုလျော့နည်းစေသည်။ အကျိုးဆက်အနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုပုံသွင်းပေးခဲ့သည်ကိုမသိဘဲဖြစ်နေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်မိဘမဲ့ကလေးငယ်မျောက်ကလေးငယ်များသည်နို့မပါဘဲကြွေကြမ်းဝါယာကြိုး၏မိခင်များကိုနို့မပါဘဲသက်သာစေသည့် terrycloth မိခင်များကို (မိခင်များ) ကိုပိုသိကြောင်းသိပ္ပံပညာရှင်များတွေ့ရှိခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်မျှသာရှိသေးသည်။ (နားထောင်ပါ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရေဒီယိုရှိုး ဒီစမ်းသပ်မှုတွေအကြောင်း။ )
ရက်ရက်ရောရောထိတွေ့၏အကျိုးကျေးဇူးများ oxytocin, ချစ်ခင်ထိတွေ့တုန့်ပြန်နေထုတ်လုပ်တာဟော်မုန်း, cortisol ၏ဆိုးကျိုးများ (စိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်း) counters ဆိုတဲ့အချက်ကိုထံမှပိုငျးတှငျပျေါပေါကျ။ oxytocin လည်းသုခချမ်းသာနှင့်ပင်စွမ်းဆောင်ရည်၏ခံစားချက်များကိုတိုးပွားလာအရှင်, နဲ့အတူ Endorphins များလွှတ်ပေးရန်ထွက်လာပါတယ်အားဖြင့် (ဆိုလိုသည်မှာ, နာကျင်မှုတံခါးခုံကိုတိုးမြှင့်) နာကျင်မှုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ (နောက်ထပ်ပေါ် ထိတွေ့မှု၏အကျိုးကျေးဇူးများနောက်ကွယ်မှသိပ္ပံပညာထို့အပြင်လုံခြုံစိတ်ချရသောထိတွေ့မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏မူလဆုလာဘ် circuit ကိုသက် ၀ င်စေပြီးနှစ်သိမ့်မှုဖြစ်စေသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒြပ်အစားထိုးအစားထိုးသူများအတွက်ကျရောက်နိုင်ဖွယ်မရှိချေ။
ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့လာမယ့်အိုအေစစ်ဘယျသူနညျး သင် cuddle-ရဲ့ buddy connection ကိုပွုစုပြိုးထောနိုင်ဘယ်သူကိုနှင့်အတူအဘယ်သူကိုမျှမသိကြသလော ဤတွင်အချို့သောအကြံပေးချက်များနေသောခေါင်းစဉ်:
မဘာသာရပ်စကားအားမည်သို့သေချာ? အယူအဆအကြောင်းကိုဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုမျှဝေနှင့်သင့်ရဲ့ buddy ထင်သောအရာကိုထွက်ရှာပါ။
အနှိပ်ကုထုံးကျောင်းကမှတဆင့်သွားသောသူငယ်ချင်းများ, သို့မဟုတ်အခြားလက်ပေါ်အနာရောဂါငြိမ်းစရာအတွက်လေ့ကျင့်ရေး, များသောအားဖြင့်လဲလှယ်သည်အနာပျောက်စေသောထိတွေ့ကြိုဆိုပါတယ်ကျန်းမာနယ်နိမိတ်အတွက်လေ့ကျင့်ရေးရှိသည်။
တစ်ဦးတက်ရောက်ရန် cuddle ပါတီ, ဒါမှမဟုတ်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူသင့်ကိုယ်ပိုင်တဦးစီစဉ်။
cuddling လူတိုင်းဝန်ဆောင်မှုကြောင်းစိတ်ကိုထားပါ။ သင့်ရဲ့ထိတွေ့သလောက်သင်ပြုသကဲ့သို့သင့်ရဲ့ buddy အကျိုးနှင့်လူတွေကိုကမ္ဘာဂြိုဟ်တစ်ဦးပျော်ရွှင်ရာအရပ်ကိုလုပ်ရဲ။
သတိပေးချက်: ဤအကြံအစည်ကိုသင်ကြိုးစားကြည့်ပါက၊ ခေတ်သစ်အနောက်တိုင်းယူဆချက်သည်လူသားများသည်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းကျပန်းလိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းဆိုင်ရာကျဉ်းမြောင်းသောအစားအစာဖြင့်သာရှင်သန်နိုင်သည်ဟုယူဆသည်။အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုပိုင်ထိုက်သော.
မှတ်ချက်များ & ဆောင်းပါးများ
ဆောင်းပါး -“ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများသည်ခင်မင်ရင်းနှီးနိုင်ပါသလော "
နယူးယော့အမျိုးသမီးဂျက်ကီမြူ Cuddling များအတွက် $ 60 တစ်ခုနာရီဖမ်းဆီး
ဒါဟာတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ကိုတကယ်လေ့ကျင့်တာနဲ့တူတယ်။ အကယ်၍ သင်သည်ခွေးတစ်ကောင်ကိုလေ့ကျင့်နေလျှင်သင်ရိုးရိုးလေးစတင်ပါလိမ့်မည်။ သူတို့က sit, come, drop လိုမျိုးအခြေခံအဆောက်အအုံတွေကိုကျွမ်းကျင်ပြီးတာနဲ့ 'walk to heel' စတဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့ command တွေကနေစနိုင်ပါတယ်။ အစတွင်သူတို့အပြုအမူများပြုလိမ့်မည်ဟုသင်မျှော်လင့်ရလိမ့်မည်။ ဒါပေမဲ့သင်စိတ်ရှည်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကသင့်ရဲ့ဖိနပ်တွေကိုဝါးပြီးမီးဖိုချောင်ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာစူးစိုက်ကြည့်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။ အိမ်ထောင်သည်ဇနီးမယားတွေထက်ဝမ်းကွဲဝမ်းနည်းအောင်လုပ်ဖို့ပိုလွယ်တယ်ထင်တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကမင်းကိုအရင်မေ့ထားဖို့သင့်မှာမကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံမရှိဘူး။ ဝမ်းကွဲတစ် ဦး သည်ခွေးပေါက်စကိုလေ့ကျင့်သကဲ့သို့၊ မိန်းမသည်လည်းကယ်ဆယ်ရေးခွေးနှင့်တူသည်။
သူနဲ့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်နေသမျှငါသူ့ကိုနေ့တိုင်းဖက်လိုက်တယ် ပထမတော့အမြန်ညှစ်လိုက်တာနဲ့အခုပွေ့ဖက်လိုက်တယ်။ ကျွန်ုပ်၏အခြားအဖော်တစ်ယောက်ပေါ်သို့တက်လိုက်ပြီးအုပ်စုလိုက်ဖက်လိုက်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ဝမ်းကွဲသည်သင်နှစ်ယောက်စလုံးထူးဆန်းသည်ဟုထင်ရသော်လည်းယခုသူကြိုက်နေသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည် အခုသူ cuddling နှင့်အတူတော်တော်လေးအဆင်ပြေသောအခါငါနည်းနည်းကြိုးစားကြိုးစားတွန်းအားပေး: သူ၏ပခုံး massaging, ဒါမှမဟုတ်လက်တိုတိုကိုင်ထား။ သူဟာများသောအားဖြင့်အံ့အားသင့်သွားပေမယ့်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ ဒီနေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာသူနဲ့စကားပြောဖို့သူ့အခန်းကိုသွားခဲ့တယ်၊ ငါစကားပြောနေတုန်းကငါတွေးမိတာကသူ့ပခုံးကိုစလိုက်တာ။ သူကကျွန်မကိုဘာကြောင့်ရှိနေရတာလဲလို့ကျွန်မကိုမေးတယ်၊ သူကသူ့ကိုငြီးငွေ့ဖို့လုံးလုံးလျားလျားရှိတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါဟာငြီးငွေ့စရာကောင်းလို့နဲ့ငါတို့ရဲ့အခြားအဖော်တစ်ယောက်အပြင်မှာမရှိလို့ ငါသူ့ကိုနိုးထနေသလားဟုမေးသောအခါသူက“ ငါကသူ့ပခုံးကိုစနစ်တကျအစုလိုက်အပြုံလိုက်နှိပ်စက်ခဲ့တယ်” ဟုဆိုသည်။ သူကကျွန်တော်ကိုသူ့စားပွဲခုံမှာအိပ်ပျော်အောင်လုပ်တော့မယ်လို့ညည်းညူခဲ့တယ်၊
ထိတွေ့မှုမဟုတ်ဘဲနောက်ကွယ်မှအဓိပ္ပာယ်ကိုဆိုလိုသည်။ ငါအချို့လူများကကိုယ့်ကိုဖတ်ပြီးသောအရာကိုဖတ်ပါနှင့်သူမ၏ဝမ်းကွဲပခုံးထိုးနှက်ထင် '??? အဲဒါမှားနေတယ်'။ အကယ်၍ ငါကသူကိုလိင်ဆက်ဆံတာကိုတွေ့ခဲ့လို့လုပ်နေခဲ့ရင်ငါ့မျက်လုံးထဲမှာမှားသွားမှာပါ။ ဒါဟာ incest ကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်။ အရာကငါသူ့ကို sexy မတွေ့ပါ။ ငါကပိုပြီးဝမ်းကွဲဝမ်းကွဲထက်သူ့ကိုတူသောသူကဲ့သို့ချစ်ကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာကြီးပြင်းလာပြီးအခုအသက် ၂၀ ကျော်ခါစမှာအတူတကွနေထိုင်နေကြပါပြီ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်၊ အခြားမိသားစုများ၌အစ်ကိုသို့မဟုတ်အစ်ကိုဝမ်းကွဲများပခုံးကိုပခုံးပေါ်တင်ခြင်းသည်သာမန်ထိတွေ့မှုဖြစ်လိမ့်မည်။ ထိတွေ့မှုအဆင့်သည်ယနေ့လူ့အဖွဲ့အစည်းရှိလူအများစုကြုံတွေ့ရသောအရာထက် ပိုမို၍ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သည်။
လူတစ်ယောက်နှင့်ထိသောအခါသင်စဉ်းစားနေသည့်အရာကိုသတိထားရန်နှင့်သင်၏ထိတွေ့မှုမှသင်ရည်ရွယ်သောအရာများကိုသတိပြုရန်လိုအပ်သည်။ သင်၏ရည်ရွယ်ချက်သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာမဟုတ်ပါက၎င်းကိုမလုပ်ပါနှင့်။ သင်လိုအပ်နေသည်ဟုခံစားရသည့်အခါခက်ခဲသော်လည်းသင်လည်းဆုများရလိမ့်မည်။
မိတ်ဆွေတစ်ဦး cuddling များအတွက်သိကောင်းစရာများ
သူမနဲ့လိင်ဆက်ဆံချင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ (သူမနှင့်ရုပ်ပိုင်းအရရင်းရင်းနှီးနှီးမကြည့်ချင်တာပါ) သူငယ်ချင်းဖြစ်ရတာ ၀ မ်းသာပါတယ်။
သငျသညျသူမ၏anice, ရှည်လျားပြီးပွေ့ဖက်ပေးခြင်းကိုခံစားနိုင်မလား? ဒီတော့လျှင်, သင်ဖြစ်ကောင်းလိင်မပါဘဲသူမ၏နှင့်အတူအိပ်ပျော်လျက်နေကြသည်ကိုခံစားလို။ ဤတွင်အခြေအနေကကိုင်တွယ်ရန်ဘယ်လိုအချို့အတွေးအခေါ်များနေသောခေါင်းစဉ်:
အကယ်၍ သူမသည်သူမနှင့်သူမနှင့်အတူအိပ်ရန်သင်အမှန်တကယ်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်၍ မသေချာမရေရာမှုများရှိပါက“ မင်းနဲ့အတူညအတူနေဖို့ငါ့ကိုဖိတ်တာလား?” ကိုသင်ရှင်းပြနိုင်သည်။
အကယ်၍ အဖြေကဟုတ်ကဲ့၊ သင်ကကောင်းပြီ၊ ငါမလိင်ဆက်ဆံချင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါနင့်ကိုအိပ်ချင်မူးတူးအိပ်ချင်နေတယ်။ မင်းအဲဒီလိုလုပ်ချင်ပါသလား
သူမမတောင်းဆိုလျှင်သင်ဘာကြောင့်လိင်မဆက်ဆံလိုသည့်အကြောင်းပြချက်မပေးပါနှင့်။ သူမကမေးရင်မင်းမှာ ED ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်တက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောနိုင်တယ်။ (ဒါကမင်းကိုသူမကိုငြင်းပယ်နေတဲ့အတွက်သူမစိုးရိမ်မှုတွေကိုလျော့ကျစေပါတယ်။ )
သူမထွက်ခင်ရီထောက်ခံလျှင်, သင်သင်ရုံမေးမြန်းခြင်းမရှိဘဲပြေးခဲ့မယ်ဆိုရင်ထက်ချွတ်ခြင်းမရှိပိုဆိုးဖြစ်ကြသည်။ သူသည်သင်၏အသုံးအနှုန်းများအပေါ်လက်ခံလျှင်, အကြီး,
အတူတူညအတူနေပြီးနောက်သင်ထပ်မံပြုလုပ်ချင်သည်မလုပ်သည်ကိုသင်နှစ်ယောက်စလုံးပိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်လိမ့်မည်။ သင်ဆွဲဆောင်မှုတိုးလာတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ နောက်တဖန်သူနှင့်အိပ်ချင်လျှင်သူပြောပါ။ (မင်းကမင်းရဲ့စိတ်ကိုမဖတ်ရတာဖြစ်နိုင်တယ်။ ) သူ့ကိုရှည်လျားစွာပွေ့ဖက်ပြီး“ မင်းနဲ့အိပ်ရတာငါတကယ်ပျော်တယ်။ တစ်ချိန်ချိန်မှာဒီဟာကိုထပ်လုပ်ချင်လား။ အကယ်၍ သူမက“ ဟုတ်တယ်” ဟုပြောလျှင်ပြန်လည်စုဝေးရန်သင်အချိန်ပေးနိုင်သည်။ သင်သူမကိုချစ်မြတ်နိုးသည်ဖြစ်စေ၊ သူမနှင့်ဆက်ဆံလိုသည်ဖြစ်စေသင်ဘာမှမပြောခဲ့ပါ။ သင်အတူတကွ ဆက်၍ အိပ်နိုင်ပြီးသင်ဆန္ဒရှိပါကအခြားလူများနှင့်လည်းတွေ့ဆုံနိုင်သည်။
သူမအတူတကွပြန်လည်စုဝေးရန်အချိန်ကိုရွေးချယ်ရန်အခက်အခဲရှိလျှင်သို့မဟုတ်သူမကယဉ်ကျေးစွာဆက်ဆံခြင်းနှင့်သင်နှင့်အတူအိပ်မပျော်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ဟုထင်လျှင်၊ “ ကောင်းပြီ၊ မင်းငါ့ကိုတစ်ချိန်ချိန်ပြန်လာချင်တယ်ဆိုရင်၊ ဖုန်းခေါ်ပါ ဦး ။ သူမစိတ်ပြောင်းသွားလျှင်တံခါးဖွင့်လိုက်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်သင်လည်းသူမကိုဖုန်းခေါ်နိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်ကသူမနှင့်အတူအိပ်နေသည်ဟုမခံစားရပါက၎င်းကိုသင်လုပ်ရန်တာဝန်မရှိပါ။ ထိုအခါမူကားငါသင်၏ပထမ ဦး ဆုံးပို့စ်တွင်ဤမျှရှုပ်ထွေးတံပိုးမှုတ်သောအခါဘာကြောင့်ငါနားမလည်ကြဘူး။ သင်သူမနှင့်အတူအိမ်ပြန်သင့်သင့်မသင့်အကြောင်းသင်ကိုယ်တိုင်ဒုတိယခန့်မှန်းနေပုံရသည်။
သင်ကိုယ်တိုင် (နှင့်သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်) ကို _not_ လိင်မဆက်ဆံရန်ကတိကဝတ်ပြုလျှင်၎င်းသည်ဖိအားကိုလျော့ကျစေသည်။ သင်ကရှုပ်ထွေးမှုအချို့နှင့်အနားယူခြင်းကိုခံစားနိုင်သည် (သင်လိုအပ်သည်ဟုထင်ရသည့်) မင်းမလိုချင်ဘူးဆိုရင်မင်းလုပ်စရာတောင်မလိုပါဘူး။ သင်သတ်မှတ်ချက်များကိုသတ်မှတ်ထားချိန် မှစ၍ သင့်အပေါ်မူတည်သည်။ အထူးသဖြင့်သင်ကွန်ဒုံးကိုဝတ်ဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်၊ မင်းကပိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်သူမစိတ်လှုပ်ရှားသွားရင်သူ့ကိုမကြာနိုင်ဘူးလို့ပြောနိုင်တယ်။ မင်းပြောတာက "မင်းကိုငါထားချင်တယ်၊ ငါအိပ်ချင်လည်းအိပ်ချင်တယ်" လို့ပြောနိုင်တယ်